စက်တင်ဘာ ၂၀ ဝ ၂၀ အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်၏ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများ Linux မှ
ဒီလ၏မနက်ဖြန်အဆုံးသတ် စက်တင်ဘာလ 2020သောအတွက်ပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်ခဲ့သော FromLinux ဘလော့ များသော သတင်း၊ သင်ခန်းစာများ၊ လက်စွဲများ၊ လမ်းညွှန်များ ၏လယ်ပြင်ကနေ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၊ ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်နှင့် GNU / Linuxယနေ့ထင်ရှားသောစာပေအချို့နှင့်အနည်းငယ်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါမည်။
Este လစဉ်အကျဉ်းချုပ် သင်များစွာသောသိထားပြီးဖြစ်သောအချက်အလက်များသည်aကိုထောက်ပံ့ရန်ဖြစ်သည် သဲ၏အသုံးဝင်သောနည်းနည်းစပါးကို ကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်သူများအားလုံးအတွက်၊ အထူးသဖြင့်၎င်းတို့အားအချိန်မီကြည့်ခြင်း၊ ဖတ်ခြင်းနှင့်မျှဝေခြင်းမပြုလုပ်သောသူများအတွက်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဆောင်းပါးတွဲများကိုမျှော်လင့်ပါသည် Blog DesdeLinux အတွင်းနှင့်အပြင်တွင်ကောင်းသော၊ ဆိုးသောနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ဝေမှုများနှင့်နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုရယူလိုသူများအတွက်၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည် သတင်းအချက်အလက်နှင့်ကွန်ပျူတာ, အ နည်းပညာဆိုင်ရာသတင်း, ကတည်းက, တစ်ခါတစ်ရံများစွာသောများသောအားဖြင့်အပေါငျးတို့သကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဖတ်ရှုဖို့နေ့စဉ်အချိန်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး လက်ရှိလ၏သတင်း အဆုံးသတ်
1 စက်တင်ဘာလ 2020 အနှစ်ချုပ်
1.1.4 ၂၀၂၀၊ သြဂုတ်လ၏အခြားအကြံပြုချက်များ
1.2.1 စက်တင်ဘာလ 2020 ဖြန့်ချီဖြန့်ချိ
စက်တင်ဘာလ 2020 အနှစ်ချုပ်
Blender 2.90 သည်၎င်း၏အင်ဂျင်များ၊ Nvidia ကတ်များ၊ သုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်နှင့်အခြားအရာများအတွက်တိုးတက်မှုများပါရှိသည်ဖြေ - ဒီဗားရှင်းအသစ်ဟာဆော့ဗ်ဝဲအတွက်အရေးကြီးတဲ့အပြောင်းအလဲတွေနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေတဲ့နောက်ဆုံးသတင်းများကိုတင်ပြထားတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Simulator ကိုအခြေခံပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုအသုံးပြုထားတဲ့ Nishita တိမ်ပုံစံအသစ်ဖြစ်တဲ့ Motor Cycles လိုမျိုး။
Apache OpenMeetings 5.0 သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ယက်ဆာဗာကိုဖန်တီးရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်ဖြေ - မကြာသေးခင်က Apache Software Foundation က Apache OpenMeetings 5.0 ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုဆာဗာကိုလွှင့်တင်လိုက်တယ်၊ အဲဒါကသင့်ကိုအသံနဲ့ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်တွေကို Web မှာစီစဉ်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးတယ်။
Linux From Scratch (LFS) - ကိုယ်ပိုင် Linux Distros ဖန်တီးရန်စီမံကိန်း: LFS ဦး ဖြစ်ပါတယ်n သင်၏ကိုယ်ပိုင် Linux system ကို source code မှလုံးလုံးတည်ဆောက်ရန်အဆင့်ဆင့်ညွှန်ကြားချက်များပေးသည့်စီမံကိန်း။ တနည်းအားဖြင့်အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကိုကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် GNU / Linux စနစ်ကိုထည့်သွင်းရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
Docker ကွန်တိန်နာများကိုစကင်ဖတ်သည့်အခါအားနည်းချက်များစွာတွေ့ရှိရသည်- ကင်းမဲ့သောအားနည်းချက်များကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်သီးခြား Docker ကွန်တိန်နာပုံများတွင်လုံခြုံရေးပြissuesနာများကိုဖော်ထုတ်ရန်စမ်းသပ်ကိရိယာများ၏ရလဒ်များ။ ထိုစမ်းသပ်မှုက Docker image scanners ၆ ခုအနက် ၄ ခုသည်အလွန်အန္တရာယ်ကြီးမားသောအားနည်းချက်များရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။
အနီးအနားရှိစက်ပစ္စည်းများနှင့်ဟက်ကာများကိုဆက်သွယ်ခွင့်ပြုသည့် BT အားနည်းချက်ကို Blurtooth လုပ်ပါဖြေ - Blurtooth လို့ခေါ်တဲ့မကြာသေးမီကဖွင့်ဟခဲ့တဲ့အားနည်းချက်က Bluetooth wireless standard မှာဟက်ကာတွေဟာသတ်မှတ်ထားတဲ့inရိယာမှာရှိတဲ့ devices တွေကိုအဝေးကနေဆက်သွယ်ပြီး user applications တွေကိုခွင့်ပြုပေးနိုင်တယ်။
NVIDIA သည် ARM ကိုဒေါ်လာဘီလီယံ ၄၀ ဖြင့်ဝယ်ယူကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်: SoftBank သည် Arm Holdings ကိုအမေရိကန်ကုမ္ပဏီ Nvidia သို့ဒေါ်လာဘီလီယံ ၄၀ (ယူရို ၃၃.၇ ဘီလီယံ) ဖြင့်ရောင်းချရန်သဘောတူခဲ့ပြီး ၄ နှစ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါရောင်းချမှုသည် Apple Inc နှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများအတွက်အဓိကကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူတစ် ဦး တည်း၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိနေပြီး Nvidia ၏အားပြိုင်မှုနှင့်ပြိုင်ဘက်များ၏ဖြစ်နိုင်သောဆန့်ကျင်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်
အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်း - SysAdmin ၏အလုပ်အတွက်ရနိုင်သောကိရိယာများဖြေ - Good SysAdmins ဟာသူတို့နယ်ပယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိရိယာတွေကိုအသုံးပြုပြီးဖြစ်နိုင်သမျှအလုပ်တွေ၊ လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ၊ လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဖို့အမြဲတမ်းကြိုးစားတယ်။ ဒီနေရာမှာကောင်းတဲ့ SysAdmin ကဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်သုံးနိုင်တဲ့ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိရိယာတချို့ကိုအကျဉ်းချုံးဖော်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်။
Waterfox - အခမဲ့၊ ပွင့်လင်းပြီးလွတ်လပ်သောဝဘ်ဘရောက်ဇာ: Waterfox လက်ရှိအဖြစ်တစ် ဦး အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာ ကဲ့သို့သောရိုးရာဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာများကဲ့သို့ Firefox နှင့် Chromeဖြစ်ခြင်းအဘို့မသာ အခမဲ့ပွင့်လင်း Cross-platform နှင့်လွတ်လပ်သောသို့သော်၎င်းသည်လုံခြုံရေးနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒများအတွက်၎င်းသည် RAM မှတ်ဉာဏ်အားနည်းမှုအပြင်
Modem Manager GUI - USB modem များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောအက်ပလီကေးရှင်း: Modem Manager GUI သည် GNU Distros / Linux ရှိအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူ USB modem များအသုံးပြုခြင်းကိုစီမံခန့်ခွဲရန်တာဝန်ရှိသော modem-manager (ModemManager) ၏ဝန်ဆောင်မှု (daemon) အတွက် graphical interface (front-end) ၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာဖြစ်သည်။
I3WM, IceWM, Ion, JWM နှင့် MatchBox - အခြားရွေးချယ်စရာ WMs ၅ ခု.
Metisse, Musca, MWM, OpenBox နှင့် PekWM: Linux အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာ WMs ၅.
PlayWM, Qtile, Ratpoison, Sawfish နှင့် Spectrwm: Linux အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာ WMs 5.
Steamcompmgr, StumpWM, Sugar, SwayWM နှင့် TWM: Linux အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာ WMs 5.
UltimateWM, VTWM, Wayland, Wingo, WM2: Linux အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာ WMs ၅.
WMFS, WMX, Window Maker, WindowLab နှင့် Xmonad: Linux အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာ WMs 5.
Microsoft Edge အတွက် Linux version ကိုအောက်တိုဘာလတွင်စတင်ရောင်းချမည်.
လူမှုကွန်ယက်များအကြပ်အတည်း - Operating Systems တွင်ရှိပါသလား။.
Firefox 81 ဗားရှင်းအသစ်ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်.
စက်တင်ဘာလ 2020 ဖြန့်ချီဖြန့်ချိ
ခြစ်ရာမှ 10.0 မှ Linux ကို: 2020-09-02
Ubuntu DesktopPack ၂၀.၀၄: 2020-09-04
Manjaro Linux ကို 20.1: 2020-09-12
FuryBSD ၂၀၂၀၀၉၀၇: 2020-09-14
IPFire ၂.၂၅ Core 2.25: 2020-09-17
4MLinux ၃၀: 2020-09-19
PuppyLinux 9.5: 2020-09-22
Linux Lite ကို 5.2 RC1: 2020-09-22
Univention ကော်ပိုရိတ်ဆာဗာ 4.4-6: 2020-09-22
ထုံးစံအတိုင်းမျှော်လင့်ပါတယ် ဤ "အသုံးဝင်သောနည်းနည်းအကျဉ်းချုပ်" မီးမောင်း ဘလော့ဂ်အတွင်းပိုင်းနှင့်အပြင်ဘက် «DesdeLinux» ၏လအဘို့ «septiembre» ၁၃ နှစ်မှစ၍တစ်ခုလုံးအတွက်, အလွန်အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်များအတွက်အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ applications များနှင့်ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့မှကြီးသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာ - အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၏ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများ
သင်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (သို့) အခမဲ့နည်းပညာ (သို့) Los Git ရဲ့ရပ်တည်မှုဟာကိုယ်ဟန်အနေအထားမတည်ရှိသင့်ဘူးလို့သင် Diego ကိုသင်သဘောတူတယ်
OpenSSH 8.4 ကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီး၎င်း၏အရေးအပါဆုံးပြောင်းလဲမှုများကိုသိ
လပေါင်းများစွာကြာသော် Snort3၏ CR နောက်ဆုံးထွက်လာသည်။